LOYAL PLEDGER PROGRAM (LPP)
Loyal Pledger Program သည် We Pledge CDM ကနေတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သူရဲကောင်းများကို ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်များမှ "လစဉ်ရေရှည်" လှူဒါန်းရန်ကတိပြုထားရမည့် Membership Program ဖြစ်ပါသည်။ လစဉ် လှူဒါန်းနေကြသော ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အလှူရှင်များအား ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့် နွေဦးတော်လှန်‌ရေး တိုက်ပွဲနေ့ရက်များကိုအမြဲအောက်မေ့နေစေမယ့် အမှတ်တရ ပစ္စည်းများကို WPC မှဂုဏ်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
​Form တင်ပြီးပါက We Pledge CDM ၏ တရားဝင် "Loyal Pledger" အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အောင်မြင်စွာ စာရင်းသွင်းပြီး မည်ဖြစ်သည်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ကူညီထောက်ပံ့နေကြသောသူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းသည် တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှု အတွက် "စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင်"ဖြစ်ပါသည်။
Loyal Pledger Program is dedicated to the donors who would like to support the people of Myanmar for humanitarian aids. We are cordially inviting international donors who are willing to help the civil staff and victims of armed conflicts and displacement due to violence throughout Myanmar to join this program. LPP is mainly targeted to the people (outside of Myanmar) who want to support Myanmar freedom fighters monthly in the long term. In this way, civil staff as well as all the international donors will be mutually fighting for freedom together. With this purpose, We Pledge CDM has createdaplatform on which each civilian staff to whom donors madeapledge for can be directly donated.
By submitting the form, you will be successfully recorded asa“LOYAL PLEDGER” of We Pledge CDM. All your generosities are essential parts of the storylines for winning in this Spring Revolution.
Thanks for your kind and generous donation.
နာမည် (Name on Certificate) *
ကျေးဇူးတင်လွှာတွင် ဖော်ပြလိုသော နာမည်ထည့်သွင်းပါ။ (Provideaname which will be shown on the certificate.)
လက်ရှိနေထိုင်သည့်နိုင်ငံ (Country of Residence) *
'အခြားနိုင်ငံ'ကို ရွေးချယ်ပါက မိမိလက်ရှိနေထိုင်သည့်နိုင်ငံကိုဖြည့်ပါ ('Other' is selected, Please fill the country here.)
နိုင်ငံခြားငွေ အမျိုးအစား (Currency) *
လစဉ်လှူဒါန်းမည်ဟုကတိပြုသော ငွေပမာဏ (Monthly Pledge Amount) *
အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၂၀ နဲ့ ညီမျှသော လှူဒါန်းငွေကိုဖြည့်ပါ (အင်္ဂလိပ်ဂဏန်းဖြင့်သာ) Minimum Amount is USD 20 or equivalent (Numeric only. For example, 20,30,50,100,200,500,1000)
လှူဒါန်းလိုသော ကာလအပိုင်းအခြား (Subscription Period) *
စတင်ပါဝင်မည့်လ (Starting Month)
(e.g JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC) တစ်ခုခုအား ထည့်သွင်းပါ။
လှူဒါန်းလိုသော နေရာ (Donation Box) *
Fallen Heroes / Spring Revolution Heroes
Limited Collection Gifts များကို လက်ခံလိုပါသလား (Would you like to receive the collection gifts?) *
‘Yes’ကိုရွေးချယ်ပါက နာမည်၊နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်ပါ) (if ‘Yes‘, please fill up Name, Address & Phone number)
နာမည် (Full Name)
လိပ်စာအပြည့်အစုံ (Full Address)
Collection Gifts များကို ဖြည့်စွက်ထားသည့် လိပ်စာသို့သာပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ (Gift will only be delivered to the address provided.)
ဖုန်းနံပါတ် (Mobile Number with Country Code)
နိုင်ငံကုဒ်နံပါတ်ပါထည့်ပေးပါရန် ( Eg. +61 45262....) အထက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ Telegram မှ ဆက်သွယ်ပါမည်။ (Please provide the phone number with country code which will be contacted via Telegram.)
CRPH မှ certificate ကို လျှောက်ထားလိုပါသလား? (Do you want Certificate of Appreciation from CRPH?)
LPP ကို ညွှန်းဆိုခဲ့သူ ( LPP Commander/ Referrer)
နွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို LPP ညွှန်းဆိုပေးသူထံမှတဆင့် လက်ခံလိုပါသလား? (Would you like to receiveagift from LPP Commanders/ Referrers?)
လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို လက်ခံရန်အတွက် မိမိ​၏ လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်များကို မဖော်ပြလိုပါက LPP ညွှန်းဆိုပေးသူထံမှတဆင့် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ If you would like to hide your identities, you may receive gifts via LPP commanders/ referrers.
Loyal Pledger ၏လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်နှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ (Benefits and Etiquette of Loyal Pledger)
Loyal Pledger အဖွဲ့ဝင်​၏ လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်နှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ
၁) Loyal Pledger အဖွဲ့ဝင်များသည် လစဉ်လှူဒါန်း မည့် အလှူငွေကို ကတိကဝတ်ပြုရပါမည်။
၂) Loyal Pledger အဖွဲ့ဝင်များအတွက် လစဉ်လှူဒါန်းမှုတွင် လွယ်ကူစွာ လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် Private Account/ Method များကို WPC မှစီစဉ်ပေးပါမည်။ (APP မှတဆင့် လှူဒါန်းစရာမလိုအပ်တော့ပါ)
၃) Loyal Pledger အဖွဲ့ဝင်များသည် WPC အဖွဲ့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ရန် Private channel များနှင့်ချိတ်ဆက်ခွင့်ပေးပါမည်။
၄) WPC မှ အလှူရှင်များထံသို့ လစဉ် လှူဒါန်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့် အမှတ်တရပစ္စည်းများပေးပို့ပါမည်။ အမှတ်တရ မေတ္တာလက်ဆောင်လေးများတွင် နွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သတ်သည့် ပစ္စည်းများအပြင်CDMers များ၏ အနုပညာလက်ရာများပါ ပါဝင်လာနိုင်သည်။
၅) Loyal Pledger အဖွဲ့ဝင်များသည် CRPH မှ Certification of Appreciation Letter ကိုလဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။(လျှောက်ထားလိုသူများထံကို Form ပို့ပေးပါမည်။)
၆) Loyal Pledger အဖွဲ့ဝင်များသည် မိမိ၏ အချက်အလက်များကို ကွယ်ဝှက်ထားနိုင်ပါသည်။ WPC မှ မည်သည့်အချက်အလက်များကို မှတ်သားထားမည်မဟုတ်ပါ။
၇) WPC မှ ကျင်းပမည့် အမျိုးမျိုးသော ပွဲများတွင် Loyal Pledger အဖွဲ့ဝင်များကို ဖိတ်ကြားမည်။
၈) ကတိကဝတ်ပြုထားသော လှူဒါန်းငွေပမာဏကို လတစ်လ၏ မည်သည့်ရက်တွင်မဆိုပေးလှူနိုင်ပါသည်။(၁-၁၅ ရက်နေ့အတွင်း လှူပေးရန် အကြံပြုပါသည်)
၉) Loyal Pledgers/WPC Members များကို NUG မှ နိုင်ငံတော်အဆင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပေးအပ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားမည့် အပြင် NUG မှ ထပ်မံ အကောင်အထည်ဖော်မည့် ပြည်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သော အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သွားပါမည်။ ထိုမျှမက လှူဒါန်းခဲ့သော အလှူငွေ များကို မှတ်သားထားပြီး ပြည်သူ့အစိုးရ ပြန်လည် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရချိန်တွင် Loyal Pledger Members/ WPC Members များအတွက် နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေးများ ခံစားခွင့်ရရှိရန် တင်ပြ ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀) Loyal Pledger အဖွဲ့ဝင်များ၏ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် လှူဒါန်းမှုများသည် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုတွင် တစ်တပ်တစ်အားအထောက်အကူပြုနေသည်။ WPC မှ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သော မေတ္တာလက်ဆောင်များကိုနောင်တချိန်တွင် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ မှတ်တမ်းအဖြစ် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Benefits and Etiquette of Loyal Pledger,
1) You will be regarded asaLoyal Donor when you pledge any amount to donate monthly for the people of Myanmar in this struggle for democracy.
2) You will haveaprivate channel to communicate directly with WPC teams. (Loyal Pledgers )
3) You will be provided withaDesignated Account to contribute your monthly donation so that you will no longer need to visit our website to generate the account number.
4) You will be proudly presented witha"Token of Appreciation from WPC" monthly. (Token of appreciation will ranged from Revolution Theme Card to local made souvenirs from CDMers.)
5) You may optionally requesta"Certificate of Appreciation from CRPH" for your monthly donation.
6) WPC will not record any data of Loyal Pledgers who would like to hide their identities.
7) You will be invited to Occasional Events organized by WPC.
8) The pledged amount can be donated on any day of the month. (You will be recommend to donate within 1st-2nd week of every month)
9) Your generosity will be proudly recorded and shared with the "National Unity Government" to safe-keep your contribution to the Nation. You will be invited to Occasional Events organized by NUG. In addition, WPC will try to make sure for Loyal Pledger Members in order to enjoy special citizenship privileges when the People's Government returns to power.
10) With your Token of Appreciation, you may also enjoy specified privilege (s) in recognition of your contribution to the country in the future.
To Agree to participate in Loyal Pledger Program under your own decision without any influence ofathird-party person, you must check the below 'Agree' box. *
Agree and I have read and understood the above stated tasks & etiquette of Loyal Pledger Program.
မှတ်ချက်။ ထည့်သွင်း အချက်အလက် နှင့် အထောက်အထား မှားယွင်း (သို့မဟုတ်) လွဲချော်မှုရှိပါက လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးပို့ရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် သေချာစိစစ်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Note : Incorrect information may hinder our delivery process (limited collection gifts), therefore it's advised to thoroughly check the inputs before submission.
ထပ်မံဖြည့်သွင်းလိုပါသလား? (Do you want to add more?) *
ထပ်မံဖြည့်သွင်းရန် မရှိတော့ပါက No ကိုနှိပ်ပီးက form ကို submit လုပ်နိုင်ပါသည်။ (If you click No, form will be submitted immediately. Please confirm above data.)
No, and Submit Form